Ulwandle-I-AOOD yeTekhnoloji encinci
Isicelo saselwandle sineemfuno ezigqithileyo zamasongo atyibilikayo ngenxa yendawo engqwabalala yaselwandle. Amava olwahlulo olubanzi lwe-AOOD kwiiprojekthi zaselwandle kunye nokuzingisa okuqhubekayo okuqinisekileyo okuqinisekisa ukuba amakhonkco e-AOOD anokuhlangabezana neemfuno ezonyukayo zabathengi. Amakhonkco e-AOOD enza umsebenzi wawo kwizithuthi eziphantsi kwamanzi, iinkqubo ze-antenna ze-satellite zaselwandle, ii-winches zaselwandle, izixhobo ze-sonar, izixhobo zokunyikima kwenyikima kunye nolwandle.
Izithuthi ezisebenza kude (ii-ROVs) kunye neenkqubo zonxibelelwano zesathelayithi njengababini bokugqibela bokusebenzisa iziliphu kwisicelo solwandle bahlala beyintsimi ephambili yokuphuhlisa i-AOOD. Ukusetyenziswa okukhulayo kweerobhothi zangaphantsi kwamanzi kumzi-mveliso weoyile wamanzi anzulu kunye nomzi-mveliso wegesi kukhuthaza uphuhliso lweenkqubo zeringi yesiliphu. Iiringi ezityibilikileyo ezisetyenziswa emanzini anzulu kufuneka zimelane neemeko ezingaphantsi kwamanzi ezinje ngoxinzelelo kunye nokothuka kunye nokubola. I-AOOD ibibonelele ngamawaka amakhonkco ezityibilikisi ze-ROVs kubandakanya ijelo elinye okanye amajelo amabini e-electro-optic slip ring for Ethernet okanye ifayibha ye-optic signal kunye neenkcaza zombane zentsingiselo ephezulu. Ezi zilingi zityibilikileyo ziyilelwe uxinzelelo lwembuyekezo, zitywinwe nge-IP66 okanye i-IP68, izindlu zentsimbi eyomeleleyo engenantambo yokulwa umhlwa kunye nemeko-bume engaphantsi kwamanzi.
Inkqubo yonxibelelwano nge-satellite ye-eriyali inokuchonga, ifumane, kwaye ilandelele imiqondiso yesatellite, kubalulekile kunxibelelwano lwaselwandle ukusuka kwindawo ekujolise kuyo ukuya kwindawo yokujonga kude. Inezinto ezintathu eziphambili-intambo yeRF, isixhobo sokudibanisa iRF kunye ne-eriyali.
I-Antenna yinto yokuqala yenkqubo yokufaka kwinkqubo yokufumana isiginali engenazingcingo, kuba inkqubo ye-eriyali yenza unxibelelwano ngeendlela ezimbini phakathi komhlaba kunye nesinye isikhululo esihamba ngokukhawuleza, emva koko abantu banokulandela umkhondo weradar, inqwelomoya, ukuqhayisa nokuhambisa izithuthi kwisikhululo sokujonga. Njengoko inkqubo ye-eriyali kufuneka iqhutywe nge-360 ° ethe tyaba okanye ujikelezo oluthe nkqo, ke ifuna isiliphu esityibilikayo ukuze ifakwe kwinkqubo ye-eriyali ukusombulula amandla ombane kunye nolawulo lwemiqondiso ukusuka kwinto enye yokumisa ukuya kwinxalenye yeRotor. AOOD coaxial rotary joint kunye ne-hybrid coaxial rotary ngokudibeneyo kunye nesilayidi sombane esiringi sinokubonelelwa.
Iimveliso ezinxulumene noko: Amakhonkco ezinto zasemanzini